Thwebula Deer Hunter 2.11.7 – Vessoft
Thwebula Deer Hunter
Deer Hunter – umdlalo Simulator yokuzingela izilwane ezisemagumbini olunothile of the world. Deer Hunter kwenza ukuhamba futhi bafuna izinhlobo eziningi zezilwane ehlathini, ezintabeni Alaska, savannas African kanye nezinye izifunda exotic. Umdlali uthola imali play and Trophies ezahlukene umsebenzi wadlula noma ukubulawa game enkulu. Deer Hunter has a esitolo arsenal enkulu nezinhlamvu, Izinhloso eyengeziwe kanye ngezikhali ezihlukahlukene evumela abadlali ukuba ukuthenga izikhali ezidingekayo ukuze style siqu ukuzingela. Futhi Deer Hunter isekela imodi esikhethekile group ukuzingela nabangani phezu internet.
Kwezinhlobo eziningi zezilwane kanye nezindawo exotic
A arsenal enkulu izikhali nencazelo eningiliziwe
EBukhoneni the Trophies ezahlukene
Amazwana on Deer Hunter:
Deer Hunter Ahlobene software:
English, Français, Deutsch, Русский... 4shared Desktop 3.24
English, Español, Deutsch, 中文... SoundCloud 2016.11.15